Ciidamada Itoobiya, Taageerayaasha madaxweynaha iyo ra'isul wasaare Geeddi oo maanta xasuuq u geystay dad rayid ah, EU-da oo dalka Belgium ugu sheegay guddoomiye Shariif Xasan in ay aad uga xunyihiin dhibaatada ka jirta Soomaaliya isla markaan cambaareeyay duulaanka Mareykanka iyo Itoobiya ee Soomaaliya. Ruunkinet 15/01/07
Ciidamada Itoobiya ee dalka qabsaday iyo kuwa laga keenay Puntland oo ay taageerayaan maleeshiya taageersan ra'isul wasaare Geeddi looguna yeero ciidamada dowladda ayaa maanta xasuuq ka geystay degaanka Huriwaa oo ah inta u dhexeysa Saraha Caymiska iyo Isbitaalka SOS.
Dadka ay xasuuqeen ciidamadan ayaa la sheegay in ay u badnaayeen dumar iyo caruur.
Warka ayaa intaasi ku daraya in dadka dhintay lagu sheegay in ka badan7 ruux ayadoo qaar kalana la geeyay isbitaallada qaarkood oo looga daweynayo dhawaacyo ka soo qaaray rasaasta dadweynaha lagu xasuuqayay.
Col. Yuusuf iyo Prof. Geeddi ayaa waxaa ka go'an sida la sheegay in ay xasuuqaan cid kasta oo ka hor timaada amarradooda in kastoo ay dad badani sheegayaan in laga yaabo in ay ayagu iska hor immaan doonaan marka uu madaxweyne Yuusuf dantiisa gaaro.
Dhanka kale, mas'uuliyiin ka tirsan EU-da ayaa maanta u sheegtay guddoomiyaha baarlamaanka in ay aad uga xun yihiin xaaladda ka jirta Soomaaliya.
Mas'uuliyiinta EU-da oo ku shiray Brusels oo ah caasimadda dalka Belgium ayaa la sheegay in ay u sheegeen guddomiye Shariif in ay sidoo kale cambaareenayaan weerarka Mareykanka iyo Itoobiya ay ku hayaan dalka Soomaaliya.